Imbwa dzakaomarara hadzitambe. Hupenyu hukuru hwaArturo Pérez-Reverte | Zvazvino Zvinyorwa
Imbwa dzakaomarara hadzitambe. Hupenyu hukuru hwaArturo Pérez-Reverte
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela, Nhema nhema
Mufananidzo naArturo Pérez-Reverte. EFE Agency
Kune muverengi akanaka hapana chakafanana nekusunga mabhuku izvo vanosvika mumweya vobvisa ura. Izvo zvandakaita nguva pfupi yadarika ndichidya iyo yakakura Macbeth naJo Nesbø mumazuva matanhatu uye vachidya izvi zvinoshamisa Imbwa dzakaomarara hadzitambe de Arturo Perez-Reverte nepakati. Mazuva maviri emisodzi kubva kuseka uye kuseka uye kubva pakunyura kwakanyanya kwemoyo.
Mazuva maviri achichinja kuita imbwa, mune yangu, hure. Mazuva maviri e manzwiro akachena kuti tese isu takamborarama kana takambogara nemumwe chete tinonzwisisa kupfuura aya mazwi nebhuku. Tese isu tinoziva kuti vanogona sei, vanokuburitsa uye vagadzire mhuka idzodzo. Ini ndichapfupisa ongororo mumutsara uyu. Don Arturo, mira Falcos, Evas nedzimwe nyaya uye enderana neNegro iyi neshamwari dzake dzese nevavengi. Kwandiri ivo vatove vasingakanganwike.
Ini ndatonyora zvakati wandei zvinyorwa pamusoro pembwa. Kunobva kurudziro, mavara ezvinyorwa, mapurojekiti mumagariro navo… ”Saka pandakaona bhuku idzva iri nemumwe wevanyori vandaida, handina kukahadzika kwekanguva kuti ndaizoifarira. Uye zvave zvakadaro.
A Arturo Perez-Reverte Ndave ndichimutevera kwemakore mazhinji. Akandifadza ne Alatriste, Ndakafadzwa nazvo Mumvuri wegondo, Ndapedza kukunda na Tsamba yakatenderera uye akaita kuti ndiseke chiuru pamwe chete naye Jodía Pavia kana rake Cape Trafalgar. Izvo zvakandinetsawo nazvo Kukomba uye haasati apedza kundibatisa nenhevedzano ye Falco, asi ini ndakajairira wavo Zvinyorwa zveSvondo uye ini ndapinda mune inopfuura imwe mopu nekuda kwavo. Kukudzwa kukuru ndinofanira kutaura. Uye kana zvasvika kune nyaya dze mutts tinobvumirana zvizere.
Ndine rinenge raibhurari yake yese, kunyangwe ini ndine akati wandei emazita ekuverenga. Zvakare mabhuku ake ekubatanidza ezvinyorwa zvake. Yekupedzisira yaive Imbwa nevanakomana vezvidhoma. Naizvozvo, pandakaona iyi nyaya, handina kuzeza uye, sekutaura kwangu, Ndakafara.
1 Mazuva makumi matatu neBlack
2 Hushamwari, kururamisira, hutsinye, rudo uye kuvimbika
3 Imbwa dzemapurisa, neo-Nazi, posh, vatengesi ...
4 «Mamwe mamili kupfuura imbwa yaGladiator«
5 Ini ndiri spartacus
6 Saka ...
Mazuva makumi matatu neBlack
Akazvipira kune imbwa dzaakange anadzo, Pérez-Reverte anoti akanyora bhuku iri mumwedzi. Uye ndinozvitenda nekuti zvakaitika kwandiri futi. Dzimwe nguva Nhau dzinouya kwatiri kamwe kamwe kana ivo vanga varipo kwekanguva uye tinoziva isu tinofanirwa kuzvinyora. Uye vanobuda vega, vasina kana kufunga. Nekuti vanotibata nenzira yakakosha uye isu tinongoda kuvaburitsa. Zvakare, tinoziva kuti zvichatinakira. Izvi ndizvo zvazviri. Nyaya pfupi uye yakatenderera.
Hushamwari, kururamisira, hutsinye, rudo uye kuvimbika
Mutsara weCervantine we Iyo Colloquium yembwa Asati atanga inotaura zvese. Ipapo Pérez-Reverte anova iyo Nhema, imbwa yemhasuru, muchinjikwa pakati peSpanish Mastiff uye mutsara weBrazil, uyo anotaura nesu mu munhu wekutanga nemutauro wake wembwa (vhara mhino dzako, ndipe paw ...). Uye isu tinoziva nyaya yake isu tiri mu Mugodhi waMargot, hure reArgentina.
Aimbove imbwa yepasi pevhu yekurwisa, Negro atove makore masere uye izvo zvatinoonga uye kunzwa zviri nani ndezvekuti aneta uye hupenyu hwakaomarara kwazvo hwakwanisawo kumutsamwisa. Asi inotsigira nheyo dzayo uye kuvimbika. Ndatove ndaverenga kuti ine makumbo mana Alatriste. Zvichida. Ini ndangoziva kuti hunhu hunondikweva hune makumbo maviri, mana kana masere.
Iyo poindi ndeyekuti shamwari mbiri dzanyangarika, Teo naBoris el Guapo, uye vatengi venguva dzose veChidyiro, pakati pavo muzivi hound anonzi Agilulf, vanotaura nezveramangwana risina chokwadi ravangadaro vakatarisana naro. Teo, mukuwedzera, aive shamwari yepamoyo yaNegro uye kunyangwe ivo vakaparadzaniswa nemamiriro ezvinhu, kusanganisira a rudo katatu, the Mutema anotarisa pabasa rekuvatsvaga. Ane zano rakakura rezvaigona kuzove zvavari uye achidedera achingofunga nezvazvo.
Imbwa dzemapurisa, neo-Nazi, posh, vatengesi ...
La hunhu gallery Ivo avo vanosangana neNegro vakasiyana kwazvo, senge nyaya dzavo. Margot Nemazwi ake eArgentina, yakanakisa setter yeIrish Dido, vertex yekatatu kekunzwa, iro benzi uye rinoshamisa Wakafa (dachshund inosetsa), uyo anotungamira gamba redu kune inotyisa Cañada Negra, kana Helmut nevarume vake (vasina pfungwa Doberman neo-maNazi). Uye ivowo Snifa naFido, imbwa dzemapurisa.
Kuva nemutsauko Tequila, wekuMexico xoloitzcuintle musoro wembwa ine njodzi «cartel» uye ndiani akaigadza zvakanaka, aine chipangamazano, Rufus, inova greyhound yeSpanish ine nhoroondo nemifananidzo zvandine ndangariro dzinosuwisa uye dzinovhundutsa dzehudiki hwangu.
Uyezve pane iyo varombo varombo vakapambwa kana kusiiwa izvo zvinopera mumawoko emhuka dzesango dzine makumbo maviri dzinozvivharira mumakeji nekudzishandisa sembwa dzinorwa kana kupenga kwadzo. Iyo nyaya dzeakasiya chokoreti labrador yakatumidzwa Tomás uye mudiki Cuckoo, anotyisa winemaker, zunza mweya.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, isu taive nemakore gumi nerimwe ekukura waini mudiki, takashinga uye takangwara sekudanwa kwaaiitwa Chiqui. Uye uchine yedu Cuckoo, muchinjikwa wePekingese, uyo atove nemakore gumi nematanhatu. Vaviri vaive Manchego mugwagwa unochinja avo vakapona pakasiiwa nekusabatwa zvakanaka, asi ndiani akavatsvaga kusvikira vazotiwana. Saka, chimbofungidzira, VaReverte, kuverenga kwakadii chitsauko icho Duel muBarranca.
«Mili yakawanda kupfuura imbwa ye ndouya aikwanisa«
Nekuti hongu, kune misodzi, asi Vanosekawo, kuseka kunodzivirirwa izvo zvinotora maziso ese muchitima chauri kuverenga. Nekuti hazvigone kumira kuseka na mutambo iwoyo waBoris Handsome muchitsauko 8. Kubva muchivanhu. Kana mune izvo chikamu chekupedzisira uko iwo mutsara wepamusoro unoita sekutsanangura wekupedzisira wevadzivisi veNigro, a bhinzi (Mufudzi wechiFrench). Ini ndinofanira kunyora iyo boxer slang dialogue pakati pavo.
"Date pog muegto, Spanish peggo," yakakwenya iyo gabacho, yakaderera asi yakajeka.
"Kutanga uchandiyamwa puramu yangu," ndakapindura. Kubata franchute.
Akabwaira bwaira nekuvhiringidzika.
-Iye Dick, moron.
Asi kune zvakawanda zvakadaro, kana saka zvematongerwo enyika zvisirizvo kana kudzoreredza, kuti avo vedu vasiri hafu yezviyero kana kuitora nepepa remidzanga vanofanira kuzvifadza.
Ini ndiri spartacus
Isu tese tanga tichida kuve Spartacus nokusingaperi. Uye saka zvinopera teo, mumwe protagonist, iyo girazi rakachinjika Nhema kana kushandurwa (zvinofungidzirwa) nevanhu kuita izvozvo mhondi inotyiwa, chikara icho chakagadzirwa natenzi uyo anowanzo ari. Asi izvo pakupedzisira anomukira, anotsiva, anozvisunungura uye anokwanisa kurarama nekunakidzwa, kunyangwe kana zvisiri kusvika kumagumo, kwerusununguko irworwo uye hunhu hwakanyanya Sezvo zvinopfuura mumwe wedu angade kuita imwe nguva muhupenyu. Kana kupa ruramisiro senge yemhuka.
Kune vanhu, kune imbwa, kune wese munhu. Unofanira kuverenga. Pasina zvivakwa, pasina hafu yezviyero, neropa, nemisodzi, nekusuwa, nekurwadziwa, asi zvakare netariro, kuseka, unyoro, kuremekedza uye rudo. Asi chete isu vedu vane imbwa uye takave nadzo hupenyu hwedu hwese vanozonyatsokoshesa iyi inoshamisa novel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Imbwa dzakaomarara hadzitambe. Hupenyu hukuru hwaArturo Pérez-Reverte
Wakanakisa Munyori Maakaundi pa Instagram
"Zvinyorwa zvemwenje." Icho chinyorwa chinoshamisa icho chiri kutsvaira Japan.